Ny Fanahy Masina no ahafahana manao izany - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2018-01 > Ny Fanahy Masina no mahatonga izany
Vonona ve ianao hivoaka ny “faritra mampionona” anao ka hametraka ny finoanao sy ny fahatokianao an’i Kristy? Teo afovoan’ny tafio-drivotra mahery vaika, dia nivoaka avy tao amin’ilay sambo azo antoka i Petera. Izy ilay tao anaty sambo izay vonona ny hino an’i Kristy sy hanaraka Azy: “handeha eny ambonin’ny rano” (Matio 1.4,25- iray).
Fantatrao ve ny toe-javatra izay nolavinao fa misy zavatra ifandraisany amin'ny zava-manahirana anao? Nitranga tamiko izany tamin'ny fahazazako. «Novako ny varavarankely tao amin'ny efitranon'ny rahalahiko ve? Fa maninona aho? Tsia! » «Izaho ve ilay nitifitra lavaka teo am-baravaran'ilay trano mitsangana teo akaikin'ny varavarana tenisy? Tsia! » Ary inona moa raha toa ka voampanga ho naman'ny mpitondra revolisiona aho, olona tsy manohitra, fahavalon'ny emperora romana? "Fa tsy izaho!" Nandà an'i Kristy i Peter taorian'ny fisamborana azy tany amin'ny zaridainan'i Getsemane. Ity tranga fandavana ity dia mampiseho hoe ahoana ny maha-olombelona, ​​malemy ary tsy mahavita mametraka zavatra irery.
Herinandro vitsivitsy tatỳ aoriana, i Petera, feno ny Fanahy Masina, dia nanao lahateny feno herim-po tamin’ny vahoaka tafavory tao Jerosalema. Ny andro voalohan'ny Pentekosta ao amin'ny Fiangonana Fanekena Vaovao dia mampiseho amintsika izay azo atao amin'Andriamanitra. Nivoaka fanindroany avy tao amin’ny faritra nampionona azy i Petera, feno ny herin’ny Fanahy Masina izay maharesy. "Ary niakatra Petera mbamin'ny iraika ambin'ny folo lahy, dia nanandratra ny feony ka niteny taminy..." (Asan'ny Apostoly 2,14). Io no toriteny voalohany nataon’i Petera – tamin-kerim-po, natao tamin’ny mazava sy tamin-kery rehetra.
Ny asan'ny apôstôly manontolo dia natao tamin'ny herin'ny Fanahy Masina. Tsy ho tafavoaka velona tamin'ny fanandramana nahafaty azy i Stefana raha tsy teo ny Fanahy Masina. Afaka nandresy ny sakana rehetra i Paoly hanambarana ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny heriny dia avy amin'Andriamanitra.
Raha ny tenantsika manokana dia malemy ary tsy mahavita isika. Feno ny herin'ny Fanahy Masina isika, tratrantsika izay rehetra ao an-tsain'Andriamanitra. Manampy antsika hivoaka avy ao amin'ilay "faritry fampiononana" - hivoaka ny "sambo" - ary matoky fa ny herin'Andriamanitra dia manazava sy hanatanjaka ary hitarika antsika.
Noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana ny Fanahy Masina izay raisinao, dia afaka mandray fanapahan-kevitra ianao handroso sy hivoaka amin'ny faritra mampionona anao.
avy amin'i Philipper Gale